अनिदो बसेर विमान दुर्घटनाका मृतकको पोस्टमार्टम गर्दै डाक्टर – Puleso
विमान दुर्घटनामा दिवंगतहरूको शव पोस्टमार्टम गर्ने डा.हरिहर वस्तीले मध्यरातिदेखि मंगलबार बिहान दुई बजेसम्म शववरिपरि बिताए। सोमबार राति १० बजे शव अस्पताल पुर्‍याएपछि त्यसको पोस्टमार्टम मध्यरातबाट सुरु भएको थियो। विमान दुर्घटनापछि झन्डै दर्जन चिकित्सकले घटनाको प्रकृति र परिस्थितिबारे जानकारी लिएका थिए।
५१ जना मृतकको हुलियासहित सबै जानकारी संकलन भएपछि विश्लेषण गर्दै क्रमशः पोस्टमार्टम गरिनेछ। डा. वस्तीसामु मंगलबार बिहान अर्का एक पीडित अघि सर्दै मृतकको हुलिया लेख्ने फारम नभएको गुनासो पोखे। ‘मसँग त फारम नै छैन,’ डा. वस्तीले जवाफ फर्काए। विशेष परिस्थिति भएकाले विशेष किसिमले पोस्टमार्टम हुने हो ? अर्का पीडितले प्रश्न गरे। धेरै व्यक्तिको निधन भएका कारण पोस्टमार्टम गरी शव बुझाउन गल्ती हुन सक्ने हुँदा धैर्य गर्न डा। वस्तीले पुनः आग्रह गरे। उनले भने, ‘गल्ती नहोस् भनेर तपाईं–हामी सबै सजग हुनुपर्छ। त्यही भएर सुरुदेखि नै व्यवस्थित तरिकाले पोस्टमार्टम गर्न खोजेका हौं।’
सामान्यतयाः दाँतको नम्बर, युनिकनेस अलग-अलग हुने भएकाले एक अर्काबीच मेल खाँदैन। फरेन्सिक विभागका विभागीय प्रमुख एवं शव पहिचान टिमका संयोजक डा। श्रेष्ठले दाँतको पहिले गरेको उपचार गरेको त्यो कार्ड भए ल्याउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘अन्तिम उपाय भनेको डीएनए परीक्षण हो।’(अन्नपूर्ण पोष्ट)